Ø Askar ka baxsatay Ciidamada Itoobiya
Ø Tareenka u kala goosha Jabuuti iyo Itoobiya oo la qarxiyay
Ø Ardayda magaalda Ziway oo mudaharaaday.
Ø Ciidamo maraykan ah oo tababar u furay ciidamo kenyan ah.
Ø Xukuumadda Suudaan oo xidhxidhay xubno ka tirsan jaaliyaddii Eritereya.
Ø Shir ay rabtay xukuumada Itoobiya in ay ku dhisto gudiga sufiyiinta oo fashilmay.
Ø Dagaal culus oo dhex maray ciidamada OLF iyo askarta wayaanaha.
Ø Barnaamujii aragtida halgamaaga iyo waliba suugaan halgameed.
Askar ka baxsatay Ciidamada Itoobiya.
6/01/04, ciidammada gumaysiga Itoobiya ee ku sugan deegaanka Dhagaxbuur waxaa ka goostay 9 askari oo hubaysan, kuwaasoo dhinaca Soomaliya u baxsaday, isla markaana aan war loo haynin meel ay ku dambeeyeen.
11/01/04, waxaa isku dhacay ciidamada shacabku u yaqaano dabaqoodhiga ee ku sugan Gasaangas iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ee gobolka Nogbeed, waxayna isku diidan yihiin habka ay u wada shaqaynayaan ee ku aaddan cabudhinta dadweynaha. Waxaa isku dhacaas ka dhashay inay 12 askari oo ka mid ah kuwa loo yaqaano Dabaqoodhiga ay la goosteen hubkoodii.
Dhinaca kale 13/01/04, meesha lagu magacaabo cadhood oo u dhaw tuulada Gudhis waxaa miino lagu qarxiyay gaadhi ay ciidammada wayaanuhu saaranaayeen, waxaana halkaas ku bas-beelay gaadhigaas iyo wixii sarnaa oo dhan.
15/01/04, Dagaal ka dhacay meel u dhow Gosolaley oo gobolka Dhagaxbuur ku taalla waxaa cadowga lagaga dilay, 5 askari, tiro kalana waa lagaga dhaawacay.
Tareenka u kala goosha Jabuuti iyo Itoobiya oo la qarxiyay
Lix qof oo rakaab ah ayaa ku dhaawacmay, ka dib markii Axaddii la qarxiyay tareenka u kala goosha Jabuuti iyo Itoobiya, waxayna arrintaasi keentay in la hakiyo tareenkii u kala socon jiray Jabuuti iyo Itoobiya. Qaraxani wuxuu dhacay aroornimadii axadda ahayd, wuxuuna ka dhacay meesha lagu magacaabo Daasbyo, oo 75 km dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Jabuuti.
Booliska dalka Jabuuti ayaa sheegay inuu gacanta ku hayo dhawr qof oo Itoobiyaan ah oo ka shaqaynayay tareenka, kuwaasoo qaraxan lagu tuhmay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa marar hore Jabhadda Oromoda ee OLF ku eedaysay inay ka denbaysay qaraxyo marar hore loo gaystay tareenka u kala shaqeeya Jabuuti iyo Itoobiya, hase yeeshee Jabhadda OLF ayaa eedaymahaas iyaduna ku gacan saydhay.
Ardayda magaalda Ziway oo mudaharaaday.
Wariyaha wakaalada wararka Ogadenya u jooga magaalda Addis-Ababa ayaa soo tabiyey in kumaankun oo arday Oromo ah ay banaanbax aad u balaadhan ka dhigeen magaalada Ziway,ardaydaas ayaa banaanbaxaas ku muujiyey siday uga soo hor jeedaan siyaasada taliska TPLF iyo go’aamadii lagaga rarayay xafiisyada Ismaamulka Oromada magaalda Addis.Ababa.
Ardaydan oo ku dhawaaqaysay eryo ay ka mid ahyeen "Addis-Abab anagaa leh" iyo ha dhoco taliska Meles ee ka ligii taliska ah" ayaa waxay u jeediyeen xukuumada wayaanaha in ay si deg deg ah uga noqoto go’aankan dulmiga ku salaysan , banaanbaxaas oo ahaa mid nabadgalyo ayaa boliskii magaaladaasi xoog u adeegsaday laguna kala caydhiyey si jujuub ah oo aan sharciga banaanbaxyada waafaqsanayn.
Wararka ayaguna naga soo gaadhay meelo kala duwan ayaa shegay in ay jaaliyadaha dibada ee Oromadu soo qabanqaabiyeen mudaaraadyo ka dhan ah taliska TPLF ee talada wadanka Ethiopia haya waxayna mudaahardayadaasi ka dhaceen magaalooyinka kala ah.
Iyo xero qaxooti oo ku taala wadanka Kenya.
Banaaxbyadaas ayaa waxaa kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo shucuurtoodu aad ay u kacsanayd kuna dhawaaqayey hal ku dhigyo lid ku ah taliska Addis-ababa.
Dhinaca kalana ismaamulka Oromada ee laga raray magaalada Addis-Ababa ayaa guryo ladajiyo looga la yahay maaglada Naziret. Taasoo keentay in xaafadaha magaalada laga raro dadkii daganaa si looga dhigo xafiisyo.
Ciidammo maraykan ah oo tababar u furay ciidamo kiinyaan ah.
Cutubyo ka tirsan ciidammada badda ee dalka Maraykanka ayaa xuduudda u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya tababarro uga furay ciidammada millatariga ee waddanka Kenya.
Tababarradani waxay ka furmeen magaalada xeebta ah ee Lamu, oo ku taalla soohdinta Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa dhinaca Badda, waxaana ciidammada Kenya la barayaa qaabka loola dagaallamo argagixisada, waxaa kaloo lagu tababarayaa qaabka loo isticmaalo hub lagu farsameeyo dalka Maraykanka oo soo galay gacanta ciidammada Kenya.
Wasiirka nabadgelyada gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay inuu Maraykanku dalka Kenya ka caawinayo sidii loola dagaallami lahaa argagixisada caalamiga ah, oo uu sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan soohdinta Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa.
Safiirka Maraykanka u fadhiya dalka Kenya ayaa isaguna cadeeyay in ciidammada dalkiisu ay tababar noocaas ah u fureen ciidammada Kenya, wuxuuna saadaaliyay in ciidammada Kenya ay si wayn uga faa’iidaysan doonaan tababarkaas loo billaabay.
Xukuumadda Suudaan oo xidhxidhay xubno ka tirsan jaaliyaddii Eritereya.
Ciidammada nabagsugidda ee dalka Suudaan ayaa 13-kii bishan albaabada u laabay labo xafiis oo Jaaliyadda Eritereya ay ku lahayd magaalada Khartuum, waxay kalo xabsiga u taxaabeen labo ka mid ah shaqaalihii xafiisyada Jaaliyadahaas la xidhay.
Sidaas waxaa lagu sheegay bayaan jimcihii ka soo baxay wasaarada arrimaha dibada ee dalka Eritereya. Waxaa kaloo bayaankaas lagu sheegay in ciidammada nabadsugidda ee Suudaan ay sheegeen inay xukuumadda Suudaan ka heleen amar lagu xidhayo xafiisyada Jaaliyadaha Erietereya.
Wasaarada arrimaha dibada ee Eritereya waxay bayaankaas si wayn ugu canbaaraysay tallaabada ay xukuumadda Suudaan kula kacday dadka eritereyaanka ah ee ku dhaqan Suudaan, waxayna xukuumadda Suudaan ugu baaqday inay sida ugu dhakhsaha badan u soo dayso dadka rayadka ah ee ay xabsiyada dalkeeda ku hayso. Waxay kaloo sheegtay in xukuumadda Suudaan ay masuuliyad buuxda ka saaran tahay nabadgelyada dadka eritereyaanka ah ee dalkeeda ku dhaqan.
Shir ay rabtay xukuumada Itoobiya in ay ku dhisto gudiga sufiyiinta oo fashilmay.
Wariyaha wakaaladda wararka Ogaadeenya u jooga magaalda Adis Ababa ayaa sheegaya in ayna cidina u soo xaadirin shir ay isugu yeedhay wasaarada cadaalada ee xukuumada Itoobiya. wariyayaasha madax banaan ee wadanka Itoobiya ( Ethiopian Free Journalists association) ayaa sheegay inay wasaarada cadaaldu ugu tala gashay shirkaas in ay u magacawdo gudi maamula suxufiyiinta Itoobiya.
Ururka wariyayaasha caalamiga ah ee EFJA, oo ay xubno ka yihiin ururada xaquuqal-insaanka ee aduunka, ururada xoogsatada aduunka iyo ururada bulshada ee rayidka ah ayaa dhamaantood canbaareyn dusha kaga tuuray xukuumada Itoobiya , islamarkaana ku tilmaamay talaabadan mid ka soo hor jeeda dimoqraadiyada iyo xuquuqda bulshada rayidka ah , cabudhinaysana xaqa xubnaha ururku u leeyahyihiin in ay doortaan maamulkooda u gaarka ah.
Dagaal culus oo dhex maray ciidamada OLF iyo askarta wayaanaha.
Radiyaha Oromada ee Sagalee Bilisumaa Oromo ayaa sheegaya in uu dagaal aad u culus dhexmaray ciidamada Jabhada Xoraynta Oromiya (OLF) iyo askarta wayaanaha halkaasna looga dilay 43askari ciidamada cagajiidka ah ee Itoobiya, lagana dhaawacay 18 askari.
Warku waxa uu intaa raaciyay in uu dagaalkani dhacay bishan horaanteedii oo uu ka dhacay tuulada Erer-Goda.
Warku waxa kale oo uu intaa raaciyay in khasaare aad u balaadhan lagaadhsiiyay ciidamada xukuumada u wakhtigeedii dhamaaday ee uu madaxda ka yahay Meles Zenawi.